Jairo Anoshandisa Maziso Chete Pakushumira Mwari | Nyaya Youpenyu
NYAYA IRI PAKAVHA Sei Tichida Kuponeswa?
NYAYA IRI PAKAVHA Kufa Uye Kumuka kwaJesu​—Kunoita Kuti Uwanei?
NYAYA IRI PAKAVHA Rufu rwaJesu Rwuchayeukwa​—Riini Uye Kupi?
OUR READERS ASK Isita Imhemberero yechiKristu Zvechokwadi Here?
NYAYA YEUPENYU Jairo Anoshandisa Maziso Chete Pakushumira Mwari
Zvipo Zvaikodzera Kupiwa Mambo
Tinofanira Kunamata Zvifananidzo Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nharireyomurindi | March 2015
Jairo Anoshandisa Maziso Chete Pakushumira Mwari
Yakataurwa Nemunin’ina Wake Samuel Ruiz-león Arroyo
Ungazvifungidzira here uchingokwanisa kufambisa maziso chete, asi muviri wako wose uchiita zvausingadi? Ndiro dambudziko rina mukoma vangu Jairo. Asi vanogutsikana neupenyu hwavo. Ndisati ndatsanangura chinoita kuti vakoshese upenyu hwavo, regai ndimbokuudzai nezvavo.
Jairo akazvarwa aine chirwere chemuuropi chinonzi spastic quadriplegia, rudzi rwecerebral palsy. * Chirwere ichi chinoita kuti asave nezvaanokwanisa kuita. Uropi hwake hahugoni kuita kuti tsandanyama dzake dzishande zvakanaka, saka maoko ake nemakumbo zvinogwinha-gwinha zvisingadzoreki. Dzimwe nguva izvi zvinoita kuti azvikuvadze. Vanhu vanenge vari pedyo naye vanogona kukuvarawo kana vakavarairwa. Zvinosuwisa kuti anowanzosungirirwa maoko nemakumbo pawiricheya kuti izvi zvisaitika.
Jairo akakura achirwadziwa zvisingaiti. Ava nemwedzi mitatu, akava nedambudziko rekugwinha, raimusiya achiita kunge afa. Kakawanda mhamha vaimubata zvakasimba, vomhanya naye kuchipatara, vachifunga kuti afa.
Kugwinha kwaigara kuchiita Jairo kwakaita kuti mapfupa ake agume aremara. Ava nemakore 16, mapfupa emuhudyu make akabva panzvimbo, zvikaita kuti vanachiremba vamuvhiye muhudyu nemuzvidya. Panguva iyi ndinoyeuka kuti Jairo aigara achiyuwira usiku hwoga-hwoga.
Kuremara kwaJairo kunoita kuti aitirwe mabasa emazuva ose nevamwe, pakadai sepaanoda kudya, kupfeka, uye kurara. Mhamha naBaba ndivo vanowanzoita izvi. Kunyange zvazvo Jairo achifanira kugara akatariswa, vabereki vedu vanogara vachimuyeuchidza kuti haangochengetwi nevanhu chete asiwo naMwari.
KUWANA NZIRA YEKUTAURA TICHINZWANANA
Vabereki vedu Zvapupu zvaJehovha. Vakatanga kuverengera Jairo nyaya dzemuBhaibheri achiri mudiki. Vanoziva kuti upenyu hunova nechinangwa kana munhu achiziva Mwari. Jairo akangokura asina zvaanogona kuita, achingogwinha, asi aigona kuva netariro yakajeka. Asi vainetseka kuti Jairo aizogona kunzwisisa Bhaibheri here.
Rimwe zuva, Jairo achiri mudiki, baba vakamukumbira kuti, “Jairo ndinokumbirawo kuti utaure neni.” Vakabva vawedzera kuti, “Kana uchinyatsondida, uchataura neni!” Baba pavakaramba vachimuteterera kuti ataure kana shoko rimwe chete zvaro, maziso ake akayangarara misodzi. Akaedza kutaura zvaiva pamwoyo pake asi zvakangogumira pakugomera asingabudisi mashoko. Baba vakanetseka nokuti vakanga vaita kuti acheme. Asi izvozvo zvakaratidza kuti akanzwisisa zvakanga zvataurwa nababa. Aingotadza kutaura chete.
Pasina nguva vabereki vedu vakacherechedza kuti dzimwe nguva Jairo aifambisa maziso ake nekukurumidza achiedza kuita kuti vazive zvaainge achifunga. Jairo airwadziwa nekuti hadzisi nguva dzose dzaainzwisiswa. Asi vabereki vangu pavakanga vava kuziva zvairehwa nekufambisa kwaaita maziso ake, vomupa zvaaida, ainyemwerera nemufaro. Ndiko kutenda kwaaiita.
Kuti tinzwanane naJairo, mumwe chiremba akati taifanira kusimudza maoko edu pataimubvunza mubvunzo. Ruoko rwerudyi rwaireva kuti hungu, rweruboshwe ruchireva kuti kwete. Saka aizoratidza zvaaida nokuramba akatarisa ruoko rwakakodzera.
ZUVA RINOKOSHA KUNA JAIRO
Zvapupu zvaJehovha zvinoita magungano katatu pagore, zvichidzidzisa vanhu vakawanda vanenge varipo kubva muBhaibheri. Jairo aifara panguva inenge yava kutaurwa nevanenge vachida kubhabhatidzwa. Rimwe zuva, Jairo ava nemakore 16, Baba vakamubvunza kuti, “Jairo unoda kubhabhatidzwa here?” Akabva angotarisa ruoko rwerudyi rwaBaba, achiratidza kuti aida kutora danho iroro. Baba vakabva vawedzera kuti, “Wakanyengetera kuna Mwari uchimuudza kuti unoda kumushumira nekusingaperi here?” Jairo akabva atizve ndee kuruoko rwerudyi rwaBaba. Zvaiva pachena kuti Jairo akanga atoudza Jehovha kuti ainge azvipira kumunamata.
Pashure pekukurukura naye Bhaibheri kakati kuti, zvakavawo pachena kuti Jairo akanga ava kunzwisisa kuti kubhabhatidzwa semuKristu kunokosha zvakadini. Saka muna 2004, akapindura mubvunzo unokosha kupfuura yose yaakambobvunzwa, wekuti, “Wakazvipa kuna Mwari kuti uite kuda kwake here?” Jairo akapindura mubvunzo uyu nekutarisa mudenga. Zvakanga zvagara zvarongwa kuti apindure mubvunzo wacho saizvozvo. Paakabhabhatidzwa ipapo kuti ave mumwe weZvapupu zvaJehovha akanga aine makore 17.
MAZISO AKE ANORAMBA ARI PANA MWARI
Muna 2011, pakava nenzira itsva yekukurukura naJairo, kombiyuta inoshanda nemaziso. Kombiyuta yacho inocherechedza kufamba kunoita maziso kuitira kuti akwanise kuvhura zvaanenge achida pairi. Kubwaira kana kuti kuramba akatarisa paari kuda kuvhura kwakafanana nekudzvanya bhatani remouse yekombiyuta. Panewo tumifananidzo twunomiririra mazwi kana kuti zvirevo, twakaiswa kuti akwanise kutaura zvaanofunga. Kana ziso rake rikabwaira pane kamwe kacho, purogiramu iri mukombiyuta inobva yataura mashoko acho.
Jairo paaiwedzera kunzwisisa Bhaibheri, chido chake chekubatsira vamwe kuti vazive Mwari chaiwedzerawo. Patinodzidza Bhaibheri semhuri, Jairo anowanzotarisa kwandiri, otarisazve kombiyuta yake. Paanodaro anenge achindiyeuchidza kuti ndinyore zvaanoda kuzotaura panenge pava kukumbirwa kuti vateereri vataurewo patinenge tichinamata nevamwe vaKristu.
Pamisangano yakadaro, zvishoma nezvishoma Jairo anotsvaga kamufananidzo kakakodzera, okabaya, uye kombiyuta yake inobva yataura zvinonzwika nemunhu wose. Anonyemwerera chaizvo paanokurudzira vari muungano saizvozvo. Imwe shamwari yaJairo yechidiki, Alex, inoti, “Ndinofara chaizvo nezvinotaurwa naJairo kubva muBhaibheri.”
Jairo anoshandisa kombiyuta yake inoshanda nemaziso uye inobudisa mazwi kuti ape mhinduro pamisangano nekuudza vamwe zvaanotenda
Jairo anoshandisawo maziso ake kuudza vamwe zvaanotenda. Imwe nzira yaanoita nayo izvi ndeyekubaya pakombiyuta pake kamufananidzo kane vanhu vemarudzi ose uye mhuka zviri kugara pamwe chete murunyararo. Paanobaya kamufananidzo kacho, kombiyuta yake inobva yataura kuti, “Bhaibheri rinovimbisa kuti nyika ichava paradhiso, pasisina anorwara kana kufa, Zvakazarurwa 21:4.” Kana anenge achiteerera akazvifarira, Jairo anobaya zvakare, kombiyuta yake yobva yati, “Unoda kuti ndikubatsire kudzidza Bhaibheri here?” Zvakatotishamisa kuti sekuru vedu vakabvuma. Zvinofadza chaizvo kuona Jairo achidzidzisa sekuru Bhaibheri zvishoma nezvishoma achibatsirwa nemumwe waanonamata naye! Takafara pakabhabhatidzwa sekuru pagungano remunharaunda muguta reMadrid, muna August 2014.
Zviri kuitwa naJairo zviri kucherechedzwawo nevadzidzisi vekuchikoro kwake. Mumwe chiremba anomubatsira padambudziko rake rekutaura anonzi Rosario akamboti: “Kana ndikazofunga zvekunamata, ndinova mumwe weZvapupu zvaJehovha. Ndakazvionera kuti kutenda kwaJairo kunoita kuti ave neupenyu hune chinangwa pasinei neutano hwake husina kutsarukana.”
Jairo anofara chaizvo pose pandinomuverengera vimbiso yeBhaibheri yekuti: “Munhu akaremara achakwakuka sezvinoita nondo hono, rurimi rwembeveve ruchashevedzera ruchifara.” (Isaya 35:6) Kunyange zvazvo dzimwe nguva achimbosurukirwa, kakawanda anenge achifara. Chinoita kuti adaro ndechekuti anoda Mwari uye shamwari dzake dzaanonamata nadzo. Kufara kwaanoita uye kutenda kwake kwakasimba kunoratidza kuti kushumira Jehovha kunoita kuti munhu ave netariro pasinei nekuoma kweupenyu.
^ ndima 5 Cerebral palsy (CP) mashoko anoshandiswa kutsanangura kukuvara kweuropi, zvokuti muviri unenge usisashande zvakanaka. Izvi zvinogona kuita kuti munhu atadze kutaura, agwinhe, uye adye zvakawandisa kana kuti zvishomanana. Pazvirwere zveCP, Spastic quadriplegia ndicho chakaipisisa nokuti chinogona kuomesa zvese makumbo nemaoko, uku musoro uchirembera.
Zvinotaurwa Neshamwari dzaJairo
Rosa ane makore 63 anoti: “Jairo anoratidza kuti anofara. Chido chake chakasimba chekushumira Jehovha chinoitawo kuti vamwe vade kumutevedzera.”
Antonio ane makore 32 anoti: “Pose pandinoona Jairo achiratidza kutenda kwake, zvinondikurudzira chaizvo.”
Andrés ane makore 67 anoti: “Ndinoona sekuti Jairo anonzwisisa dzimwe dzidziso dzeBhaibheri kundipfuura.”
March 2015 | Jesu Anotiponesa—Pachii?
NHARIREYOMURINDI March 2015 | Jesu Anotiponesa—Pachii?